Pabrikan'i vy mora vy manodina vy sy mpamatsy | Ouzhan
Ny ivon-toeran'ny milina fanodinana dia tena mety amin'ny fanodinana ireo karazan'asa toa ny faritra miolakolaka sy ny fitaovana miolakolaka. Ny faritra miolikolika dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria, toy ny turbine glades, propeller an'ny sambo, vokatra indostrialy misy tavoahangy vita amin'ny kodiara, sns. Amin'ny ankapobeny, ny faritra miolaka dia voahodina amin'ny fihodinana.
Ny vy karbonika dia firaka vy-karbonina miaraka amin'ny atin'ny karbaona 0,0218% ka hatramin'ny 2,11%. Antsoina koa hoe vy vy. Amin'ny ankapobeny, izy io dia misy silikônika, manganese, solifara ary phosforus kely ihany koa. Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny habetsahan'ny karbaona vy amin'ny karbaona no mampitombo ny hamafiny ary avo kokoa ny tanjaka, fa ny ambany kosa no mampidina ny plastika. Carbon vy CNC fihodinana no be mpampiasa ary mety amin'ny ankamaroan'ny faritra mekanika. Ouzhan dia hampanjifa matihanina ny faritra ampiasain'ny milina mifanaraka amin'ny sary sy ny takiana aminao.
Steel CNC mihodina-mijaly Carbon vy manodina faritra Machining Center
Tombontsoa amin'ny vy mihodina vy ouzhan Carbon
OEM namboarina vy nitodika vy fanompoana-China Shanghai CNC vy niodina vy mpanamboatra faritra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Raha ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manodina vy vy miaraka amina faritra mitodika sy azo itokisana avo lenta CNC. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana mahomby sy miasa dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny vy miodina vy. Ho fanampin'izay, ny vokatra vy vy misy karbonika izay manome mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome vokatra fihodinana vy an'ny karbaona karbonika ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy izahay.
Ouzhan vy vy manodina faritra machining faritra tombony
(1) Ny fihodinana dia mety amin'ny fanodinana sehatra mihodina anatiny sy ivelany. Ny elanelan'ny famolavolana ny mari-pahaizana dia IT13 ～ IT6, ary ny lanjan-javatra Ra roughness dia 12.5 ～ 1.6.
(3) Ny fitodihana dia manana fahaiza-mampifanaraka matanjaka amin'ny firafitra, fitaovana, andiam-pamokarana, sns. Amin'ilay workpiece, ary be mpampiasa. Ankoatry ny famadihana ny karazana vy, vy vy, ary metaly tsy ferrous dia mety hivadika tsy metaly toy ny fiberglass, bakelite, nylon sns. Ho an'ny metaly sasany tsy ferrous izay tsy mety amin'ny fikosoham-bary, ny fitaovana fanodinana diamondra dia azo ampiasaina amin'ny famadihana tsara, izay afaka mahazo ny mari-pahaizana avo lenta sy ny soatoavina bitika kely.
(4) Afa-tsy ny sisin-tany tsy mitovy amin'ny banga, ny ankamaroan'ny fihodinana dia fanapahana mitohy miaraka amin'ny fizarana hazo fijaliana mitovy. Noho izany dia miova kely ny hery fanapahana, miorina ny fizotran'ny fanapahana, izay mahatonga ny fanapahana haingam-pandeha sy ny fanapahana mahery vaika ary manana fahombiazan'ny famokarana avo.
Tombony amin'ny serivisy fanodinana vy karbonika Ouzhan
- Ny vokatra vita amin'ny vy vita amin'ny karbaona rehetra dia iharan'ny fitsapana avo lenta.
-Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ampahany mihodina vy karbaona.
Previous: Namboarina manokana fanodinana varahina fanodinana faritra